Vaovao - Ahoana ny fomba hisorohana ny sisin-tany rehefa manapaka vera amin'ny jet jet?
Ahoana no hisorohana ny sisin'ny sisin-tany rehefa manapaka fitaratra amin'ny jet jet?
Rehefa ny vokatra fitaratra fitetezana rano dia misy ny olana sasany amin'ny fanapahana sy ny sisin'ny vera tsy mitovy aorian'ny fanapahana azy. Raha ny marina, ny waterjet efa niorina tsara dia manana olana toy izany. Raha misy ny olana dia tokony hadihadiana faran'izay haingana ireto lafin-waterjet ireto.
1. Avo loatra ny tsindry jet jet
Arakaraka ny haavon'ny tsindry fanapahana waterjet no avo kokoa ny fahaizan'ny fanapahana, fa ny matanjaka kokoa kosa ny vokany, indrindra amin'ny fanapahana fitaratra. Ny fiatraikan'ny rano ao an-damosina dia hihozongozona ny vera ary hiteraka faran'ny tsy mitovy. Amboary tsara ny tsindry jet water mba hahafahan'ny jet jet manapaka ny vera fotsiny. Mety indrindra ny mitazona ny vera tsy hisy fiantraikany sy hovitrovitra araka izay tratra.
2. Ny savaivon'ny fantsom-pasika sy ny noza dia lehibe loatra
Ireo fantsom-pasika sy fantsom-bato firavaka dia tokony hosoloina ara-potoana aorian'ny faharerahana azy ireo. Satria ny fantsom-pasika sy ny nozera dia ampahany mora tohina, dia tsy afaka mifantoka izy ireo aorian'ny fandroahana rano maromaro, izay hisy fiantraikany eo amin'ny manodidina ny vera ary amin'ny farany hahatonga ny sisin'ny vera vaky.
3. Misafidy fasika tsara kalitao
Amin'ny fanapahana rano, ny kalitaon'ny fasika misy rano dia mifanaraka mivantana amin'ny vokatra fanapahana. Ny kalitaon'ny fasika ranomainty tsara kalitao dia avo dia avo, antonony ny habeny ary somary kely ihany, fa ny fasika ambany kosa dia matetika mifangaro amin'ny zara-pasika misy habe samy hafa sy ambany kalitao. , Raha vantany vao nampiasaina dia tsy hitovy intsony ny herin'ny fanapahana ny jet jet-n'ny rano ary tsy ho fisaka intsony ny sisiny fanapahana.
4. Famahana olana amin'ny haavo
Mampiasa tsindry rano ny fanapahana rano, ny tsindry famoahana fanapahana no lehibe indrindra, ary avy eo mihena be. Matetika ny vera dia manana hatevin'ny sasany. Raha misy elanelana kely eo anelanelan'ny vera sy ny lohan'ny fanapahana dia hisy fiantraikany amin'ny vokatry ny fanapahana ny waterjet. Ny vera fanapahana waterjet dia tokony hifehy ny elanelana misy ny fantsom-pasika sy ny vera. Amin'ny ankapobeny, ny elanelana misy eo amin'ny fantsom-pasika sy ny vera dia voafaritra ho 2CM.
Ho fanampin'ireo lafin-javatra etsy ambony ireo dia mila manamarina ihany koa isika raha ambany loatra ny tsindry ny jet-n'ny rano, raha omena ara-dalàna ny rafitra famatsiana fasika, raha tsy mandeha tsara ny fantsom-pasika, sns., Tsara kokoa ny manamarina toerana hafa, amboary ary soraty ny sanda tsara indrindra Aza soratana amin'ny sisiny mandritra ny fanapahana fitaratra